Iimiselo zoLawulo lwe-Obama: Iingoma kunye neengxabano
Kutheni Kukho Ukudideka Kakhulu Ngezinto U-Obama Azenzayo kwaye Akazange Ayenze Ku-Ofisi
Ukusetyenziswa kukaMongameli uBarack Obama wee-odolophu ezilawulayo kwakuxubusha kakhulu kunye nokudideka ngethuba lakhe emibini kwiofisi. Abagxeki abaninzi bathi u-Obama ukhankanya inani lokurekhoda; abanye babethetha ngokungalunganga ukuba wayesebenzisa amandla okufihla ulwazi olusesikweni kuluntu okanye ukuchithwa ilungelo lokuthwala iingalo. Uninzi lwabantu lukhohlise amanyathelo amagosa amagosa alawulayo, kwaye zombini izinto ezifani kakhulu.
Enyanisweni, imiyalelo yesigqeba sika-Obama yahamba ngokuhambelana nabaninzi bamandulo abahamba phambili kwinani kunye nobubanzi. Amanqaku amaninzi e-Obama alawulayo ayengenangqiqo kwaye ayelungelelanisa ukutshatyalaliswa kwentlalo; Banikezela umgca wokulandelana kwamanye amasebe aseburhulumenteni, ngokomzekelo, okanye kusekwe ii-commissions ezithile zokujongana nokulungelelanisa ukulungelelanisa.
Abanye bajongana nemiba enzima njengento yokufuduka kunye nobudlelwane besizwe kunye neCommunist Cuba. Omnye wemithetho elawulayo engummangalelwa ka-Obama yayiza kusindisa ama-5 million abafudukayo abahlala eUnited States ngokungemthetho ekugqithisweni, kodwa umyalelo wawuvalwe yiNkundla Ephakamileyo yase-US. Omnye wazama ukuseka kwakhona ubudlelwane bezobudlelwane, ukuvula kwakhona ii-ambasade kunye nokwandisa uhambo kunye nentengiso kunye neCuba.
Ukusetyenziswa kuka-Obama kwemigqaliselo elawulayo , njengaleyo nayiphi na umongameli, kwakuyihloko echaphazelayo kwezopolitiko zaseMelika. Kukho zonke iintlobo zamabango asendle ngexesha lakhe lesibhozo kwiminyaka. Nanku ukukhangela kwiingcamango ezinhlanu ezijikeleza uhambo luka-Obama lwemiyalelo yolawulo, kunye nenyaniso emva kwabo.
I-Order yokuqala yoLawulo luka-Obama i-Hide Records zayo ezivela kwi-Public
U-Alex Wong / Getty Izithombe Iindaba / i-Getty Izithombe
U-Obama wasayina umyalelo wokuqala wokulawula ngomhla kaJan. 21, 2009, ngolunye usuku emva kokufungiswa njengomongameli we-44 we-United States. Oku kunyaniseka. Ibango lokuba umyalelo wokuqala wokulawula u-Obama "ukutywina iirekhodi zakhe", nokuba kunjalo, buxoki.
Uthotho lokuqala lolawulo luka-Obama lwenene lwenze into eyahlukileyo . Ikhuphe ukulandelwa komyalelo ongaphambili owawusayinwa nguMongameli uGeorge W. Bush ngokunciphisa ukufikelela komntu kwiirekhodi zomongameli emva kokushiya iofisi. Kaninzi "
U-Obama Uthabatha Izibhamu Ngomyalelo Olawulayo
I-Denver, iColo. Umthengisi wezibhamu uphethe i-AR-15 ye-Colt, isikhali esasithengiswa kuphela ukuthotyelwa komthetho kunye nempi kodwa ngoku singathengwa ngabantu abemi emva kokuphela kweBill Bill. Thomas Cooper / Getty Izithombe
Injongo ka-Obama yayicacile: Uthembisa ukusebenzela ukunciphisa ubundlobongela bombundu eUnited States njengenxalenye ye- ajenda yekota yesibili . Kodwa izenzo zakhe azicacanga.
U-Obama wabiza inkomfa yenkampani yamabonakude kwaye wamemezela ukuba wayekhupha phantse amabini "amanyathelo alawulayo" ekujonganeni nodlova. Izenzo ezibalulekileyo ezibizwa ngokuba yiyo yonke indawo ihlola umntu ozama ukuthenga umpu, ukubuyisela ukuvinjelwa kwezixhobo zokuhlaselwa komkhosi, kunye nokuguqulwa kokuthengwa kwintlobo.
Kodwa kwacaca ukuba izenzo zakwa-Obama eziphezulu zahluke kakhulu kunezolawulo zomthetho kwiimpembelelo zazo. Uninzi lwabo aluzange luthwale ubunzima bomthetho. Kaninzi "
U-Obama watyikitya i-Orders e-923
Ukunqoba kukaRonald Reagan ngo-1984 kuthathwa njengengxowankulu. U-Dirck Halstead / Getty Izithombe Umxhasi
Ukusetyenziswa kuka-Obama kwesigqeba sokulawula bekuyihloko yeimeyile ezininzi ze-viral, kubandakanywa nalowo oqala ngale ndlela:
"Xa uMongameli wakhupha i-Orders e-30 yoLawulo kwixesha elide kwi-Ofisi, abantu babecinga ukuba kukho into ephazamisayo .XA UCINGA NGANI NGE-923 IMITHETHO EQHUBILEYO KUNYE ICANDELO LOMTHETHO OMUNYE? KUNYE UMPHAKATHI WENKQUBO OYAVUMELWA UKUBA UKUSEBENZA UKUPHATHWA KWE-HOUSE NO-SENATE. "
Ngokwenene, nangona kunjalo, u-Obama wayesebenzisa umyalelo osisigxina ngaphantsi kobuninzi bamongameli kwimbali yanamhlanje. Ngaphantsi kwama-Republican abaongameli uGeorge W. Bush noRonald Reagan .
Ekupheleni kwekota lakhe lesibini, u-Obama wakhupha i-oda engama-260, ngokutsho kohlalutyo oluqhutywa yi-American Presidency Project kwiYunivesithi yaseCalifornia eSanta Barbara. Ngokuthelekiswa, uBush wakhupha i-291 ngemigangatho yakhe ebini eofisini, kwaye uRagag wakhupha 381. Okunye »
U-Obama Unokukhupha i-Order eLawulayo Ukuvumela ukuba akhonze Ixesha lesithathu
UMongameli uBarack Obama unikela idilesi yakhe yesibini yokuvulwa ngoJan 21, 2013, eWashington, DC. Justin Sullivan / Getty Images Iindaba
Kwakukho ukucatshulwa kwiindawo zokuzimela ezenziwa ngu-Obama ngenjongo ethile yokukhupha, mhlawumbi ngolawulo olulawulayo, ukulungiswa kwe-22 kuMgaqo-siseko wase-United States, ofundwa ngenxalenye: "Akukho mntu uya kunyulwa kwi-ofisi kaMongameli ngaphezu kokuphindwe kabini ... "U
Nanku umgca: Usuku lokugqibela luka-Obama njengomongameli nguJanuwari 20, 2017 . Akayi kukwazi ukunqoba nokukhonza kwikota yesithathu. Kaninzi "
U-Obama Ucwangciselwe Ukukhupha Umyalelo Olawulayo Ukubulala i-Super PACs
Ndiyabulela iNkundla ePhakamileyo yase-United States kunye nabemi beZizwe eziManyeneyo, nabani na onokuqala ii-super PAC. UCharles Mann / Getty Images Iindaba
Kuyinyani ukuba u-Obama ubini kwirekhodi malunga nokunyaniseka kwakhe kwi -PAC ezinkulu kunye nokuziqesha njengethuluzi lokuxhaswa ngezimali ngexesha elifanayo. Uthi uguqulele iNkundla ePhakamileyo ukuba ivule izikhukhula kwiimfuno ezikhethekileyo kwaye zathi ngethuba lokhetho luka-2012 , Ukuba ungeke ukwazi ukubetha 'em, qhafaza' em.
Kodwa akukho xesha u-Obama uphakamise ukuba uya kukhupha umyalelo wokubulala umyalelo wokubulala ama-PAC aphezulu. Oko akutshoyo kukuba iCongress kufuneka iqwalasele ukuchitshiyelwa komgaqo-siseko ukugqithisa isinqumo seNkundla ePhakamileyo se-2010 kwi- Citizens United, kwi-Commission ye-Electoral Commission , eyakhokelela ekubunjweni kwe-PACs.
Ama-Microphone aMaxabiso aphezulu